HAMAKY AMIN'NY TENY Abbey Abui Acholi Alur Amharique Anglisy Arabo Armenianina Armenianina (Andrefana) Ateso Attié Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Bassa (Cameroun) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Biak Bichlamar Boulou Bété Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chopi Chuabo Cinghalais Cinyanja Damara Dangme Danoà Douala Drehu Dusun Efik Espaniola Estonianina Fante Fidjianina Fon Frantsay Futuna (Atsinanana) Ga Galoà Gitonga Goun Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guéré Haoussa Herero Hindi Holandey Hongroà Hunsrik Iban Ibinda Ibo Icibemba Indonezianina Iokrenianina Irlandey Italianina Javaney Jula Kabiyè Kabuverdianu Kachin Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kissi Kongo Koreanina Kpelle Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Goadelopy Kreôla any Guyane Kreôla any Haïti Kreôla any La Réunion Kreôla any Seychelles Krio Kurde Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Lhukonzo Lingala Lomwe Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mambwe-Lungu Marathe Mazahua Mbunda Meru Mooré Myama Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Ngangela Nias Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Okpé Oromo Otetela Ourdou Pendjabi (Shahmukhi) Pidgin (Cameroun) Pidgin Nizerianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Ponape Portogey Portogey (Portogaly) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Rapa Nui Rarotonga Romanianina Rosianina Runyankore Rutoro Rômania (Gresy Atsimo) Rômania (Gresy Avaratra) Rômania (Macédoine) Rômania (Macédoine) Sirilika Rômania (Slovakia Atsinanana) Samoanina Sangir Sango Sena Sepedi Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Sidama Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swati Tahisianina Tailandey Tajiki Talian Tamoul Tandroy Tankarana Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Angoley Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tigrigna Tiorka Tiv Toba Tongan Tshiluba Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Umbundu Urhobo Uruund Vezo Vietnamianina Wallis Wichi Wolaita Yacouba Zandé Zoloa Éwé
NA MAMAKY gazety ianao, na mijery tele, na mihaino radio, dia misy resaka olon-dratsy sy ady ary zavatra ratsy be foana! Mety hoe ianao mihitsy koa no marary, na nisy maty ny havanao akaiky.
Izao ve no tian’Andriamanitra hiainako sy hiainan’ny fianakaviako?
Iza no mba afaka manampy ahy amin’izao mahazo ahy izao?
Mba hisy ihany ve izany fiadanana izany?
Mamaly an’ireo fanontaniana rehetra ireo ny Baiboly.
AMPIANARIN’NY BAIBOLY FA HANAO ZAVATRA MIAVAKA ETO AN-TANY ANDRIAMANITRA.
Ny olona tsy hijaly intsony, na ho antitra, na ho faty.—Apokalypsy 21:4
Hatanjaka ny malemy tongotra, ka ho afaka hitsambikina.—Isaia 35:6
‘Hahiratra ny mason’ny jamba.’—Isaia 35:5
Hatsangana ny maty.—Jaona 5:28, 29
Tsy hisy harary intsony ny olona.—Isaia 33:24
Hanana sakafo be dia be ny olon-drehetra.—Salamo 72:16
Mety tonga dia hieritreritra ianao hoe: ‘Izany ve tsy nofy ihany?’ Andriamanitra mihitsy anefa no nampanantena fa tena hataony ireo, ary tsy ho ela. Hazavain’ny Baiboly hoe ahoana no hanaovany an’izany.
Ankoatra izany koa, dia atoron’ny Baiboly hoe inona no tokony hatao raha te ho sambatra sy ho afa-po amin’ny fiainana, dieny izao. Diniho kely ange e! Inona izao no tena mampiasa saina anao? Tsy manam-bola ve, ohatra, ianao, sa mikorontana ny tokantranonao? Marary ve ianao, sa misy maty ny havanao? Afaka mampahery anao sy manampy anao amin’izany ny Baiboly. Valiana ao, ohatra, ireto:
Ahoana no hataoko amin’izao olana mahazo ahy izao?
Afaka ny ho sambatra ve izahay mianakavy?
Mbola ho hitantsika ve ireny havantsika efa maty ireny?
Azo antoka ve fa hotanterahin’Andriamanitra daholo ny zavatra nampanantenainy?
Te hahafantatra an’izay ampianarin’ny Baiboly ianao, matoa mamaky an’ity boky ity. Jereo àry ireo fanontaniana eny ambany pejy, satria hanampy anao hahazo kokoa an’izay lazain’ny Baiboly izany. Olona an-tapitrisany no tia mianatra Baiboly miaraka amin’ny Vavolombelon’i Jehovah. Manantena izahay fa ho tianao koa izany. Enga anie ka hotahin’Andriamanitra ianao rehefa mianatra Baiboly!
MIANARA MITADY ANDININ-TENY
MISY boky sy taratasy 66 ao amin’ny Baiboly. Misy toko sy andininy izy ireny, ka mora jerena. Rehefa mahita andinin-teny ianao ato, dia ny tarehimarika voalohany aorian’ny anaran’ilay boky no toko, fa ny tarehimarika aorian’izay kosa no andininy. Ny hoe “2 Timoty 3:16”, ohatra, dia midika hoe Timoty Faharoa, toko faha-3, andininy faha-16.
Vetivety ianao dia hahay hamadika Baiboly, raha jerenao ny andinin-teny ato. Ary maninona raha manomboka mamaky Baiboly isan’andro? Raha mahavita toko telo na dimy isan’andro ianao, dia ho vitanao ao anatin’ny herintaona ny Baiboly manontolo.